शरण खोज्नेहरूको- नोभेम्बर अपडेट 2018 | USAHello | USAHello
संयुक्त राज्य अमेरिका आउने शरण खोज्नेहरूको लागि अद्यावधिक गरिएको जानकारी निम्न.
अपडेट 19 नोभेम्बर (नोभेम्बर) 2018: संयुक्त राज्य अमेरिका जिल्ला न्यायाधीश राष्ट्रपति आदेश अप रोक्न 19 डिसेम्बर (डिसेम्बर).
आधुनिकीकरण: न्यायकर्तालाई राष्ट्रपति अर्डर संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यवस्था विपरीत हो भन्नुभयो. अमेरिकी कानून अमेरिकी क्षेत्रहरूमा व्यक्ति शरण लागि आवेदन पेश गर्न योग्य हुनुहुन्छ कि प्रदान. Aans गर्न भनेर प्रविष्टि को पोर्ट मार्फत आउन छ. मा 19 नोभेम्बर, न्यायकर्तालाई संयुक्त राज्य अमेरिका व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो.
Maalve अर्थ नयाँ संकल्प?
को को निर्णय अर्थ 19 नोभेम्बर / नोभेम्बर कि संयुक्त राज्य अमेरिका छैन प्रविष्टि अनुरोध को पोर्ट मार्फत आयो गर्ने मानिसहरूलाई शरण को पाठ्यक्रम मा काम गर्नुपर्छ. रिजोल्युसन अमेरिका यस्तो व्यक्ति लागू गर्न अनुमति गर्नुपर्छ. तर यो निर्णय यो आश्रय प्रदान गरिने होइन. यो अझै पनि अमेरिका मा शरण प्राप्त गर्न अति गाह्रो छ.
यो इन्टरनेट संयुक्त राज्य अमेरिका मा सुरक्षा को लागि आवेदन मा शरण खोज्नेहरूको को अधिकार मा शरणार्थी स्थिति समर्थन.
राष्ट्रपति ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका को दक्षिणी सीमाना मा शरण खोज्नेहरूको सीमित गर्न आदेश हस्ताक्षर. नयाँ संकल्प शरण खोज्नेहरूको संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रवेश को पोर्ट जाना प्रदान.
शुक्रबार मध्यरातमा निर्णय सक्रिय सुरु हुनेछ9नोभेम्बर र लागि रहनेछ 90 एक दिन. नयाँ संकल्प वयस्क बिना बच्चाहरु लागू हुँदैन.
यो परिवर्तन मान्छे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश को पोर्ट बाहेक कहीं प्रविष्ट भने, छैन शरण आवेदन पेश गर्न अनुमति गरिनेछ भन्ने हो. बरु, तिनीहरूले अवैध देश प्रवेश पक्राउ गरिनेछ.
अमेरिकी कानून तिनीहरूले अमेरिकी क्षेत्रमा हुँदा प्रवासिहरु शरण लागि लागू गर्न सक्ने प्रदान. त्यसैले राष्ट्रपति को नयाँ नियम नागरिक अधिकार समूह द्वारा चुनौतीपूर्ण.
त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका आउने शरण खोज्नेहरूको को व्यवस्था परिवर्तन भयो. मा 11 जुन 2018 , संयुक्त राज्य अमेरिका
अभियोजक जेफ सत्र मूल आफ्नो देशहरूमा घरेलु हिंसा वा गिरोह हिंसा भागिरहेका छन् जो मानिसहरू साधारण अमेरिका मा शरण लागि आवेदन पेश गर्न अनुमति छैन गरिने बताए.
तपाईं मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सीमाना गर्न आउँदै छन् भने यो Altgieraly शरण खोज्नेहरूको असर. तपाईं कहाँ गिरोह हिंसा यसलाई जीवन खतरनाक बनाउँछ एक देशबाट आएको हुन सक्छ. वा एक महिला आफैलाई र छोराछोरीलाई सुरक्षा राख्नको लागि हिंसात्मक एक घर छोडेर हुन सक्छ. नयाँ व्यवस्था किनभने ती कारणहरू शरण प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर भन्छन्.
अमेरिका मा शरणार्थी स्थिति प्राप्त गर्न अत्यन्तै कठिन. सबैभन्दा शरण खोज्नेहरूको स्वीकार छैनन्. व्यवस्था किनभने को सतावट एक डर छ भने तपाईंले शरण लागि अनुरोध गर्न सक्छ भन्ने प्रदान:
तपाईंले यी कारणहरू मध्ये एक आउने हुनुहुन्छ भने पनि, यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा अध्यागमन र भन्सार प्रशासन साबित गर्न गाह्रो हुन सक्छ (ICE).
शरण लागि आवेदन नियम बारेमा थप जान्न यो सरकार पृष्ठ पढ्नुहोस्
कसरी शरण लागि लागू गर्न – इन्टरनेट मा शरणार्थी केन्द्र जानकारी
यी कारणहरूले गर्दा एक लागि आश्रय खोजिरहेका सीमा पुग्नु भने के मलाई हुनेछ?
सबै शरण खोज्नेहरूको आश्रय खोजिरहेका तिनीहरूले अमेरिकी सरकारले detained हुन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ गर्नुपर्छ (यस थुनामा केन्द्रमा रहन compelled गर्न) धेरै हप्ता. तिनीहरूले सीमा आइपुग्दा केही मानिसहरू आफ्ना छोराछोरीलाई अलग गरिएको छ. देखि 20 जुन, यो अनुमति छैन. त्यहाँ आमाबाबुले छोराछोरीलाई फेला पार्न मद्दत गर्न समूह संयुक्त राज्य अमेरिका मा काम गर्दै. तर त्यहाँ सानो छ यदि तपाईं पहिले नै संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा भइरहेको आयोजित छन् जो कोहीले तपाईं वा तपाईंको बच्चाहरु मदत गर्न सक्नुहुन्छ कि.
तपाईं एक वकील लागि सोध्नु. संयुक्त राज्य अमेरिका मा, तपाईं सल्लाह गर्ने अधिकार छ, तर तपाईं एक वकील सोध्नुपर्छ. तपाईं भन्नुपर्छ “म अब एक वकील कुरा गर्न चाहनुहुन्छ”. तपाईं सम्म एक वकील उसलाई संग कुरा प्रत्येक व्यक्ति देखि जारी मांग एक वकील पहुँच को अधिकार प्राप्त.
के म मेरो साक्षात्कार पारित भने? तपाईं अझै पनि detained छन्?
तपाईं शरण लागि एक साक्षात्कार पारित गरेको छ भने (भनिन्छ “गर्न Khvfa Mvsvqa”) , तपाईं शरण लागि आफ्नो मामला बनाउन एक न्यायाधीश अघि सुनुवाइ प्राप्त हुनेछ. यो एक सुनुवाइ प्राप्त गर्न धेरै लामो समय लाग्न सक्छ. प्रतीक्षा गर्दा यसलाई आफ्नो रिहाई हुनुपर्छ.
तथापि, शरण खोज्नेहरूको पकड को बन्दीगृहहरूमा केही पनि साक्षात्कार उत्तीर्ण गरे पछि. मा2जुलाई / जुलाई, एक संघीय न्यायाधीश शरण खोज्नेहरूको राम्रो कारण बिना अन्तरवार्ता पछि ICE सुरक्षित छैन पर्छ भनेर भन्नुभयो. तपाईं साक्षात्कार पारित गरेपछि फन्दामा भने, एक वकील कुरा गर्न अनुरोध.
तपाईं आफ्नो बच्चा अलग छन्?
केही अवस्थामा, छोराछोरीले आमाबाबुको शरण खोज्नेहरूको विभाजित थिए.
तपाईं आफ्नो बुबा वा आश्रय आवेदन समयमा आफ्नो बच्चा, अध्यागमन र भन्सार जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका मा थुनामा को सम्पर्क लाइन रिपोर्टिङ अलग गरिएको छ भने (ICE) रूपली आंकडा 1-888-351-4024. त्यहाँ स्पेनी भाषा बोल्ने संचालक उपलब्ध निःशुल्क सेवा हो. बाट शुक्रवार गर्न सोमवार देखि घण्टा काम 8:00 छु 8:00 साँझ. (पूर्वी समय). तपाईं थुनामा केन्द्र ICE भित्रबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ भने, गति डायल नम्बर प्रयोग 9116 # निःशुल्क संचार मंच मा.
शरणार्थी Resettlement को बरफ कार्यालय संग काम (ORR) बच्चाहरु पत्ता लगाउन. तपाईं पनि संख्या ORR अभिभावक आफ्नो हटलाइन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 1-800-203-7001 तपाईं अमेरिकी सरकार आफ्नो बच्चा डी एक یھ कि लाग्छ भने. तपाईं थुनामा केन्द्र ICE देखि कल गर्दै हुनुहुन्छ भने, गति डायल नम्बर प्रयोग 699 # निःशुल्क संचार प्रणालीमा. उपलब्ध 24 घण्टा एक दिन,7एक हप्ता, दिन स्पेनिश वा अंग्रेजी मा.
तपाईं पनि गर्न सक्छन् (वा आफ्नो साथी वा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले वा आफ्नो वकील) ई-मेल मार्फत ICE वा ORR सम्पर्क:
Parental.Interests@ice.dhs.gov ई-मेल ICE
info@ORRNCC.com मा ई-मेल ORR